> Resource> Draịvụ> Olee naghachi Data si Mpụga diski ike chọpụtaghị
Enwere m ike Naghachi Data Ọ bụrụ na diski ike na-adịghị Achọpụtara?
M nwere Western Digital mpụga ike mbanye na-adịghị achọpụtara site Windows ọzọ. Mgbe m ikwunye ya, na ike mbanye adịghị egosi na "My Computer" ma ọ na-egosi na Disk. M maara na e nwere ihe na-ezighị ezi na m na diski ike. Ma, anaghị m mkpa m data na na draịvụ ike. M nwere ike ime ya?
Ọfọn, gị mbanye ike ka a ghọtara site na kọmputa gị. Ma mgbe ị na-agbali iji nweta ya, ụfọdụ njehie ozi dị ka "The mbanye-apụghị enweta", "The mbanye na-adịghị formatted" ma ọ bụ "Raw mbanye na-adịghị initialized" ga-popped elu na gị na ihuenyo. Ihe mere njehie itịbe nwere ike dị iche iche, na ihe ndị kasị nkịtị na otu onye bụ na e nwere a rụrụ arụ oru na draịvụ ike gị ma ọ bụ MBR gị mbanye na-emerụ.
Ya mere, olee otú na-agbake data si mpụga ike disk chọpụtaghị? Ọ bụ na-omume ma ọ bụrụ draịvụ ike gị nwere ike ghọtara site na kọmputa gị, n'agbanyeghị na ọ na-apụghị ahụrụ ma ọ bụ enweta. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ fọrọ nke nta ndị kasị mma nhọrọ n'ihi na ị na-agbake data ma ọ bụrụ na diski ike na-adịghị achọpụtara. Ị nwere ike iji ya na-agbake fọrọ nke nta nile di iche iche nke furu efu faịlụ site na partitions na diski ike gị mfe, gụnyere foto, ọdịyo faịlụ, videos, akwụkwọ faịlụ, wdg
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery naghachi data site na diski ike chọpụtaghị ugbu a!
3 Nzọụkwụ naghachi Data si Mpụga diski ike chọpụtaghị
Ugbu a, ka anyị na-eme mgbake na Windows version nke Wondershare Data Recovery. Mac ọrụ pụrụ ịgbaso yiri ọrụ iji hazie ihe ndị mgbake.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode naghachi data si ike mbanye chọpụtaghị
Mgbe launching Wondershare Data Recovery na kọmputa gị, ị pụrụ ịhụ usoro dị ka oyiyi n'okpuru.
Ebe a ka na-ahọrọ "nkebi Iweghachite" mode na-amalite.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị mpụga ike mbanye anya n'ihi na partitions na ya
Ugbu a mkpa ka ị họrọ draịvụ ike gị na iti on "Next" button ịchọ partitions na ya.
Ebe a niile partitions na gị mpụga ike mbanye ga-egosipụta, na ị dị nnọọ mkpa họrọ nkebi na ị bụ banyere naghachi data site na pịa "Malite" ka iṅomi maka data na ya.
Nzọụkwụ 3 Naghachi Data si diski ike chọpụtaghị
Mgbe iṅomi dị n'elu, niile recoverable data ga-edepụtara ke omume window. Ị nwere ike ịlele otú ọtụtụ gị furu efu faịlụ nwere ike natara site ị na-elele faịlụ aha.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka akara faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Gịnị ma ọ bụrụ Mpụga Drive-apụghị amata ma ọ bụ Achọpụtara ...?
The kwere omume ihe maka nke a nke pụrụ ịbụ n'ụzọ a mebiri, bụzi ihe mgbe ochie Windows ọkwọ ụgbọala, ọjọọ ndi, wdg Ọ bụrụ na-agbalị ọzọ kọmputa na-apụghị idozi nsogbu a, na ị na-ukwuu-atụ aro na-eziga gị mbanye na a ngwaọrụ idozi ọrụ.